Oromia: Waamicha Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e | OromianEconomist
Oromia: Waamicha Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e	February 27, 2016
Tags: Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Oromia, Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016, Oromo, Waamicha Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e
Waamicha Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e
Guraandhala 25, bara 2016
Barattoota manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran maraaf;-Godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti barattootni mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi qophaayinaa barumsa dhaabuudhaan FXG finiinsuun wareegama guddaa kaffalaa injifannoolee cululuqoo akka Sabaatti itti boonnu galmeessisaa jiru. Humni tokkoome salphaatti diina ofirraa buqqisa. Kanaaf barattootni Oromoo mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa, qopyaahinaa akkasumas dhaabbilee olaanaa koolleejjii fi yuuniversitii Oromiyaa fi Finfinnee dabalate keessaa barattan hundi tokko Qabsoo bilisummaatti makamee lubbuu isaa utuu dhabuu kaan ammoo barumsatti hirmaachuun umurii diinaa nurratti dheeressuu waan tahuuf barataan kamuu bakka jiruu FXGf dursa kennee gara Qabsoo makamuu akka qabu Qeerroon Biisummaa waamicha dabarsa.
Hojjattoota Mootummaa “civil Service” keessa hojjatta hundaaf: Yeroo mootummaan Wayyaannee labsii labsuun gara laafina tokko malee ilmaan Oromoo karaa nagaa mirga gaafatan irratti dhukaasa banuun ajjeessaa, qaamaa hirdhisaa, biyyaa har’aa jiru kanatti isin callisuun gaafatamummaa seena fi heeraa jalaa akka isin hin baafne hubachiisaa; dirqama isin irraa eegamu akka bahattan waamicha lammummaa isiniif goona. Dirqamni dabalataan addatti isin irraa eegamu hojii mootummaa laamshessuun karoora jalaa fashalsuu akka
Ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisii mootummaa wayyaanee keessa jirtaniif, rasaasni isin baattan ilmaan Oromoo ittiin ajjeessuf osoo hin taanee diina uummata Oromoo fixuuf ka’e kanatti akka deebistan jabeessinee waamicha goona. Haadha, abbaa, obboleessa, obboleetti fi ilmaan keessan utuu ilaaltanii qiyyaafattanii rasaasan ajjeeftu yoo tahe har’a qalbiin isin tuqamuu baatu bor seenaa jalaa akka hin baane hubattanii; waamichi kabajaa irra deebinee isinifi goonu, meeshaa baattan gara diina uummata Oromoo, mootummaa wayyaaneetti galagalchaa jennee irra deddeebinee dhaamna.
Saboota cunqurfamoo kanneen olla Oromiyaa taatan, addatti uummata Sidaamaa, Beneshangul, Gaambeellaa fi Ogaaden ilmaan keessan beelaan dhumaa, gadadoo barabaraan hammaataa malee foyya’insa hin agarsiifne keessatti mootummaa itoophiyaa kan ofiin jedhu Wayyaaneen isin kuffisuu ni hubattu. Kanuma waliin qabeenya jiruu fi jireenya keessan ta’e lafa kan danda’an ofii fudhatanii kaan alagaatti gurgurataa jiraachuu walumaan qalbeeffataa jirra. Walumaagalatti miidhaan isin irra gahaa jiruu fi nurra gahaa jiru walfakkaataa dha. Kanaaf qabsoo gaggeessaa jirrutti humna horree dhageessifnee mul’isuuf qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kanatti akka makamtanii waliin qindeeffannu waamicha isinif dabarsina.
Waamicha addaa uummata magaala Finfinnee keessa jiraattaniif:– Haalli yaaddessaan yeroo ammaa mul’atu mootummaa wayyaaneetiin dhufe. Kana booda dhiyeessiin midhaani magaalaa Finfinnee akka hin seenne quba isin qabsiisaa; dukkana hamaatti deemamaa akka jiru hubachiisna. Kanaaf falli tokkichi jiru qabsoo Uummatni Oromoo gaggeessaa jirutti makamuudhaan mootummaa abbaa irree kan ta’e Wayyaanee ofirraa kaasuun mirga hiree murteeffannaa Ummataa waliin akka kabajchiifnu waamicha isiniif goona.
Uummata Oromoo biyya hambaa jiraattan hundaaf:- Qabsoo dargaggoonni fi shamarran Oromoo, Qeerroon taasisaa jirru ni beektu, ni hubattus jennee abdanna. Qabsoo harka qullaa diina dura dhaabbachuudhaan taasifamaa jiru kanaaf wareegama ulfaataa kaffalaa akka jirrus ni hubattu jennee amanna. Fiixa bahiinsa FXG kanaaf karaa International Qeerroo Support Group deggarsa hatattamaa akka gootan waamicha lammummaa isiniif dabarsina.